I-Biography ye-Christian Rock Band BarlowGirl
I-BarlowGirl isenokuthatha umhlalaphantsi kumculo wamaKristu ngo-2012 emva kweminyaka engama-9, kodwa umculo wabo (kunye nothando lwethu) uhlala. Funda kabanzi malunga noodade ababethayo kwaye bancedisa iingcango ezivulelekileyo kwezinye iinqununu zamaKristu ezibhekene namacwecwe avela kwi-biography.
BarlowGirl - Amalungu eBantu
Rebecca Barlow (isiginci, amagama asemva) -kuzalwa ngomhla kaNovemba 24, 1979
U-Alyssa Barlow (iibhasi, iibhobhodi, izandi) - lokuzalwa ngoJanuwari 4, 1982
ULauren Barlow (iindubhu, izandi) -ukuzalwa kukaJulayi 29, 1985
U-Becca, uAlyssa, noLauren Barlow baziwa kakhulu kwihlabathi ngokubanzi njengeBarlowGirl. Oodade abathathu abavela e-Elgin, e-Illinois bahlala ndawonye, ​​basebenze ndawonye, ​​behamba ngehlabathi kunye, banqula kunye kunye benza umculo omangalisayo kunye. Intsapho "ishishini" alizange lihlanganise nje intombazana emithathu mhlawumbi ... umama nobaba bobabili babandakanyeka kakhulu emisebenzini yabo, besuka endleleni kunye noodade kwikhokhwe nganye (kunye noyise, uVince, kwaze kwalawula i-band) .
Kuba la mabhinqa abancinci bekungakaze kube malunga nokuba kusezingeni kunye nokuzonwabisa. Bema ngokukrakra kwiinkolelo zabo, kwaye behlala bevulekile ngokwaneleyo ukuvuma ukuba babengaphelelanga. Udade wabelana ngeengxaki zabo ngokucacileyo ukuze bakhule. UThixo wayekho (kwaye kusekhona) kuzo zonke iinkalo zobomi babo ... i-ups, the downs and in-betweens. ULauren Barlow wachaza, esithi, "UThixo usebenzisa ezintathu intombazana eziqhelekileyo ezivela e-Elgin, e-Illinois, ezingenanto yokunikela ngaphandle kukaKristu.
Sonke sasilungele ukuhamba senza into yethu, kwaye Wasibiza waza wasiphendula waza wathi, 'Ndinento enokuyithetha kuyo ihlabathi'. "
Iimpawu zeBharlowGirl ezibalulekileyo
Isayinwe ngo-Oktobha 14, 2003 ukuya kwiiRekhodi eziNgcono
I-albhamu ye-Debut yakhululwa ngoFebruwari 24, 2004
Ukuthatha umhlalaphantsi kumculo wamaKristu ngo-2012 (Benza isimemezelo ngo-Oktobha 2012)
"Ithemba Liza Kukhokela Ngethuba," ngo-2012 - ongatshatanga
Ulendo lwethu ... Ngokude , ngo-2010
Uthando & iMfazwe , Septemba 8, 2009
Ikhasi leKrismesi , ngo-2008
Enye INgxelo Yokungena
BarlowGirl Starter Ingoma
"Haleluya (Ukukhanya Kufikile)" - Jonga
"Ukuphela Okuhle" - Jonga
"Ungalokothi Wodwa" - Jonga
"Ndiyakudinga Undithanda" - Jonga
"Grey" - Jonga
Iingoma zabantu abaye bahluke kuThixo
I-BarlowGirl Ihlabelela enye yeeVakala ezili-10 eziphezulu ze "Obusuku boBusuku"
BarlowGirl kunye namanye amantombazana loo dwala
I-BarlowGirl kunye noLutsha oluLutsha olutsha
I-BarlowGirl kwi- WOW Ifuna u-2005
Iimpawu ze-10 eziphezulu zamaKristu ze-2004
Umculo wamaKhristu Top Top Hits of 2004 Okukhethwa ngabafundi Abafundi
BarlowGirl - Sisters Njengamanje kwiNtlalo
ULauren Barlow kwi-Twitter - nge-Instagram
Rebecca Barlow kwi-Twitter
UAlyssa Barlow on Instagram
UBill kunye noGloria Gaither Music of Christmas
Ukufumana Umsebenzi kuMboniso woMculo wamaKristu
Iincwadi eziPhezulu zeSkeptics zobuKristu